Kali Linux 2020.1, ikozvino inowanika (kwete) yekutanga vhezheni yegumi iri | Linux Vakapindwa muropa
Kali Linux 2020.1, ikozvino inowanika (kwete) yekutanga vhezheni yegumi iri
Pakutanga mwedzi uno, Inogumbura Chengetedzo yakatizivisa kune shanduko huru muhurongwa hwekushanda hwahunovandudza. Izvo zvakakosha nekuti, kusvikira zvino, isu taigona kuita zvese zvese pasina kupinda password, asi ivo vakaona kuti kune vashandisi vakaisa iyo sisitimu yekushandisa seyenyika uye izvi zvinogona kuve zvine njodzi. Nechikonzero ichocho, uye kubva KaliLinux 2020.1 izvo zvave zviripo kukandwa kunze maminetsi mashoma apfuura, ikozvino zvichave zvakafanira kugadzira mudzi mushandisi.
Sezvo vazhinji venyu vatoziva kare, Kali Linux iri kugovera Debian-yakavakirwa Iyo yakagadzirirwa kuyedza chengetedzo yemarudzi ese esoftware uye Hardware. Aya marudzi ekuparadzira anozivikanwa se "ethical hacking", nekuti inofungidzirwa (zvinova zvakawanda zvekufungidzira) kuti tichaishandisa kuti tione kuchengetedzwa kwemakomputa edu pachedu. Iyo nyowani vhezheni, senguva dzose, yaisanganisira maturusi matsva ekurwisa kana kutarisa chengetedzo, asi kwete, haisi yekutanga vhezheni yegumi iri sezvayakapihwa nekuti makumi emakore anotanga nemakore 1.
Kali Linux 2020.1 inouya ne "isina mudzi" uzivi nekutadza
Iwo matsva akakurumbira anosvika neKali Linux 2020.1 akapfupikiswa mu5:
Iwe hausi mudzi nekutadza.
Nyowani yakapusa Kali isa mufananidzo.
Kali NetHunter Midzi.
Kuvandudzwa kwemusoro uye Kali Undercover. Tinorangarira izvozvo Undercover iwo dingindira rinoedza kutevedzera Windows.
Zvishandiso zvitsva. Mupfungwa iyi, ivo vari kugadzirisawo mifananidzo kuitira kuti zvese zvionekwe.
Mune vhezheni yapfuura vakaenda kubva kuGNOME kuenda kuXFCE nekumisikidza, asi ivo vaisada kumira ipapo. Kali Linux 2020.1 yakaunza nyowani nyowani yeGNOME iyo yave kuwanikwa pa yakajeka uye yakasviba madingindira. Kuenderera mberi nematimu, iyo Undercover yakaunzwa mune yapfuura vhezheni yakagamuchira zvigadziriso izvo zvinoita kuti iwedzere kufanana neWindows.
Vashandisi vanofarira vanogona kurodha Kali 2020.1 kubva Iyi link en 32bit uye 64bit shanduro. Kana iwe ukazviedza, mubvunzo: iwe unofungei nezve iyo nyowani "isiri midzi" uzivi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kali Linux 2020.1, ikozvino inowanika (kwete) yekutanga vhezheni yegumi iri
Izvo zvinodikanwa kuti ugadzire mushandisi mutsva muiyo 2020 vhezheni; nei kunze kwemudzidzi mushandisi ini ndagadzira mumwe mushandisi, zvakanaka here kana kwete?
Kupasa chaiko …… kushaya chekutaura, makorokoto kune vanogadzira, zvinoshamisa.
TrafficToll, yakanakisa sarudzo yekudzora network traffic mune system application
VRS uye CacheOut, zviviri zvitsva zvinokuvadza zvinokanganisa Intel